'प्रेमबिवाह हिन्दी फिल्मको कथा जस्तो लाग्थ्यो'
छोरीले पढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित नभएको बेला तराई गाउँका जन्मेकी छोरी म। सावाँ अक्षर चिनेका बाबु आमा। एक त छोरी त्यसमाथी घण्टौँ टाढाको स्कलु। तै पनि बाआमाले पढाउनु भयो। छोरीलाई घण्टौँ टाढा पठाएर पढाउनु कुरालाइ मैले कत्तिचोटी लापरवाहि गरे। स्कलु जान मानिन। 'बुढी कति गनगन गर्न सक्ने।' भन्दै कतिचोटी आमाको गुनासो गर्दै हिडे।
आमाले भन्नु हुन्थ्यो 'भोली त पनि आमा होलीस। सासु होलीस। बल्ल बुझ्लीस।' मनमनै लाग्थ्यो त्यो बुझ्ने समय कहिल्यै नआओस। समय मेरो वसमा किन हुन्थ्यो र! बाआमाको वलले स्कुल सकाए। क्याम्पस जाने बेला थियो। त्यो प्रेम गरेर विवाह गर्नु हिन्दी फिल्मको कथा जस्तो थियो। त्यसै 'लभ' त्यो बेला महत्वको बिषय भएन।
'छोरी अब त तिमि पनि सासु हुने भयौ।' स्काइपमा बाले यसो भने पछि झल्यास्स भए। फेरी अर्को भुमिका। 'म सासु बन्ने दिन आइसक्यो!' छोरी, आमा, बुहारी हुँदै सासु सम्मको भूमिका सम्झ्यो भने समयले नेटो काटेको अनुभव त गराउँछ तै पनि मनले नमान्ने। 'साँच्चै समय कत्ति छिट्टो दौडिन सकेको।'
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ५, २०७४, १२:१४:०६